Langsat any Thailand " Journey-Assist - Longkong. Fotoana Langsat
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Voankazo any Thailand » Langsat any Thailand
Ny voankazo Langsat dia sakafo matsiro any Azia atsimo atsinanana sy Thailand manokana. Langsat dia mbola tsy dia malaza loatra amin'ireo mpizahatany, saingy ahitsy tsikelikely izany. Rehefa dinihina tokoa, ny voan'ny langsat dia tena matsiro!
Tia an'i lansat Thais be mba hanomezam-boninahitra azy na dia iray amin'ireo faritany Thailand any aza - Narathiwat.
Ny tsy fahatomombanan'ny langsat eo amin'ny mpizahatany, angamba, dia ny ankamaroany no manompo azy amin'ny fahitana tsy am-pototra. Ireto misy voankazo bitika kely miakatra amin'ny 2.5 ka hatramin'ny 5 sm miaraka amin'ny volon-koditra vita amin'ny volontsôkôlà ary fotsy-mavo.
Ny pentina langsata translucent dia manitra ary feno fofona. Mizara, toy ny tongolo gasy amina 5-6 segondra, izay manandrana mamy-manintona :) ary mahatonga fiaraha-miasa miaraka amin ny tahom-bary, akondro ary voaloboka. Fitambarana mahaliana?
. Tsara homarihina fa ao amin'ny pulp dia misy taolana mafy izay tsy tokony hosedraina hitetika, satria mangidy be loatra.
Misy ny fiheverana mahazatra momba izany longkong (Thai long-gong) io no anarana faharoa an'ny langsat. Raha ny marina dia marina izany fa tsy izany. Long Kong koa Langsat, karazany hafa fotsiny, ivelany dia saika mitovy, fa manana ny tsiro hafa kely. Manitra kokoa izy io, ary misy mangidy somary miharihary kokoa. Tsy dia matetika no hita eo amin'ireo kaontera ho an'ny mpizahatany. Ary ny voan'ny Long Kong dia ampiasain'ny Thais, indrindra amin'ny akora ampiasaina amin'ny fitafiana hena hena.
Ny sandan'ny lansat any Thailand
Amin'ny vanim-potoana io, mihena ny 40 ka hatramin'ny 60 baht isaky ny 1 kg.
Amin'ny vanim-potoana tsy hita, mety ho hita ao amin'ny tsena Thai ihany koa izy io fa ho avo kokoa ny vidiny.
Vanim-potoana amin'ny lansat sy longkong any Thailand
Nanomboka ny volana jona ka hatramin'ny oktobra.
Any amin'ny faritra sasany any Thailand, ary koa arakaraka ny filàn'ny hazo langsata, ny voa dia azo zanana indroa isan-taona. Noho izany, ny voany dia mety ho hita mandritra ny taona.
Ny langsat dia amidy amin'ny kluster fotsiny. 15-30 voankazo ao anatin'ny tsirairay. Ilaina ny mitahiry ireo voankazo amin'ny endrika endrika, satria eo izy ireo dia azo tsimbadika kokoa noho ny rehefa misaraka azy ireo.
Fomba fitahirizana langsat
Raha mikasa ny hatao ianao fivarotana langsat lava andro vitsivitsy, ny voankazo dia tsy maintsy hisaraka amin'ny bunch, ary tazonina amin'ny hafanana +10 - 12 ° C ary miaraka amin'ny hamandoana avo indrindra. Amin'ny toe-javatra toy izany ny voankazo dia hihazona ny bikany sy ny tsirony mandritra ny roa herinandro.
Ahoana ny fisafidianana langsat
Raha amidy amin'ny felana fotsiny ny langsat, dia alao aloha fa tsy mandoto ao anaty sampana ihany ny olitra, satria miankohoka amin'io voankazo io io.
. Ary ho mariky ny fankasitrahan'izy ireo dia mazàna mamorona ny zanatanany mivantana amin'ny sampana nafenina amin'ny voankazo ao amin'ny langsat.
Ny voankazo dia tokony hamelona sy hihazona tsara amin'ny sampana iray.
Ny velaràn'ny langsat dia tsy tokony hisy lozatta, dents na toerana tsy ampoizina.
Ahoana ny fanadiovana ny langsat
Mora ny manadio langsat.
Voalohany dia mila manimba ny felanao miaraka amin'ny rantsantanana eo amin'ny toerana tsy ara-dalàna ianao, na manaikitra azy fotsiny moramora.
Aorian'io dia mora misokatra ny voanjo. Tena nisaraka tamin'ny nofo izy.
Fa ny fangatahana dia mitaky fahitsiana marina, satria ny tsaramaso langsat dia misy ranon-dronono mivalona be loatra, izay, rehefa miakanjo ny volon-doha na ihany amin'ny hoditra ihany, dia tena esorina.
Raha mila manadio langsats be dia be ianao dia araho ny ohatry ny Thais ny tenany, ary ampiasao fonon-tànana.
Matetika ny langsat dia mihinana vaovao toa itony, saingy tsy dia fahita ny manampy azy io amin'ny zava-pisotro mahamamo, na ho famenoana tsindrin-tsakafo na salady misy voankazo.
Mahasoa fananana langsat
Ny pulp langsat dia misy asidra ascorbic be dia be, izay manamafy orina tsara ny hery fiarovana ary mampiakatra ny fanoherana ny vatana amin'ny otrikaretina sy ny virus.
Ny voankazo Langsat koa dia ahitana kalsioma be dia be, izay tsara ho an'ny fahasalaman'ny fantsika, ny volo ary ny rafitra skeletal.
Ny potasioma, be dia be ao amin'ny langsat, dia singa fisorohana mavitrika amin'ny aretina ny rafi-pitatitra.
Ny asidra bio ao amin'ny lansate dia misy fiatraikany tsara amin'ny fampandehanana fahatsiarovana, ary amin'ny ankapobeny dia tena ilaina amin'ny fiasan'ny atidoha.
Ity voankazo ity ihany koa dia tsara amin'ny antipyretika.
Ny fampiasana ara-dalàna ny langsat, dia misy fiantraikany tsara amin'ny rafi-pitatitra, manohitra ny tsy fisian'ny insomnia, ary koa mpiara-miasa matetika amin'ny lehilahy maoderina - harerahana sy adin-tsaina. Ity dia isaorana amin'ny vitamina B.
Ny langsat am-pototra dia ampiasaina ao fanafody nentin-drazana Firenena aziatika! Ambonin'izany, ny zavamaniry dia ampiasaina tanteraka, ary tsy ny voany ihany. Ny fanapahana ny akoho, ny voany langsata, ravina ny hazo - dia mihetsika avokoa ny zava-drehetra. Miorina amin'ny fototr'izy ireo, fanafody maro no ampiasaina amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny aretina isan-karazany.
Ny fahavoazana ny langsata
Ity voankazo ity dia tsy misy contraindications manokana, fa kosa tokony hitandrina ianao.
Ilaina ny mifankahalala tsara amin'ny langsat, satria foana ny risika ny tsy fandeferana ny olona iray na singa iray hafa amin'ny fandrafetana ny làlany.
Ilaina ny tsy handehanana langsat ho an'ireo olona voan'ny diabeta.
Amin'ny ankapobeny, dia atoro ny tsy hanararaotra mihinana voankazo, ary langsat tsy misy maningana. Aza mihinana voankazo mihoatra ny 5-6 isan'andro. Tena io ihany ny habetsaky ny hahazoanao tombony ambony indrindra ary miaraka amin'izay fotoana izay no ahatahan'ny vatana misitraka azy.